प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न: भगौडालाई किन सूर्य चिह्न चाहियो ? « Amsanchar
काठमाडौँ, ३ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका नेताहरुलाई चुनाव चिह्न सूर्य किन चाहियो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रदेश १ को सम्पर्क कमिटीले आज गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाललगायत नेताहरु केन्द्रीय कमिटीमा नआएर अध्यक्ष र महासचिवलाई थाहा नदिई निर्वाचन आयोग गएको बताए ।
उनले भने, “चुनाव चिह्न किन चाहियो ? चिह्न दाबी गरेकोले एकपटक पनि चुनाव लडेको छैन । सूर्य चिह्न चाहिन्छ भने बैठकमा आउनुस् । उनले चुनावी गठबन्धन गर्दा नमानेकाले जनताले अर्कै चिह्नमा भोट हाल्नु परेको बताए ।
उनले अदालत र आयोगलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाए । उनले आफूले न्यायाधीशसँग भेट नगरेको जिकिर गरे । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जनता रुवाउने भन्दै उनले आफूले हसाउँन खोज्दा उनीहरुले नै पीर मानेको बताए । ‘मारेर पनि रुवाएको छ । कुटेर पनि रुवाएको छ । अनि मैले हँसाए भनेर पीर परेको छ । जोक्करै रहेछ । हसारै खत्तम पार्‍यो भन्छन् । नेपाली जनता हाँसेकोमा किन पीर परेको होला अचम्म लाग्छ,’ उनले भने ।